- आजबाट मलमास शुरु
मलमास के हो र कसरी पर्छ ?
यो वर्ष आज जेठ २ गतेदेखि मलमास सुरु हुँदैछ । यो मलमास एक महिनासम्म चल्नेछ । ज्योतिषशास्त्र अनुसार ३ वर्षको अन्तरालमा एक चान्द्र महिना बढी हुने हुनाले यसलाई अधिकमास भनिन्छ । अर्को यो महिनालाई पुरुषोत्तम नारायणले जिम्मा लिएकाले यसलाई पुरुषोत्तम मास पनि भनिन्छ ।
हाम्रो ज्योतिषीय मान्यता अनुसार सौर्यमास र चान्द्रमास गरेर दुई प्रकारका महिना चलिरहेका हुन्छन् । सौर्यमास गतेका आधारमा चल्छ भने यो ३० दिनको हुन्छ । चान्द्रमास पनि १५–१५ दिनका तिथि मिलेर ३० दिनको नै हुन्छ ।
मलमास पर्ने अवस्था
यिनै तिथिहरू चन्द्रमाको कलाको क्षय–वृद्धिका आधारमा सिर्जना हुन्छ ।
। एक चान्द्र महिनामा शुक्ल र कृष्ण गरी दुई पक्षहरू हुन्छन् । त्यसैले तिथिका आधारमा विचार गर्दा एक वर्षमा सामान्यतया १२ चान्द्र महिना र चौबीस पक्षहरू हुन्छन् । अधिकमास परेको वर्षमा तिथिका हिसाबले हुने चान्द्र महिनाको संख्या १३ हुन्छ भने पक्षको संख्या पनि २६ हुन्छ ।
दिनका हिसाबले एक चान्द्र महिनामा लगभग साढे २९ दिन र एक चान्द्र वर्षमा ३५४ दिन हुन्छन् भने सौर्य वर्ष लगभग ३६५ दिनको हुन्छ । यो गणना अनुसार एक वर्षमा सौर्य र चान्द्र वर्षबीच ११ दिनको अन्तर पर्छ, दुई वर्षमा यो अन्तर २२ दिन पुग्छ भने तीन वर्षको अन्तरालमा ३३ दिनको अन्तर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा तस्रो वर्षमा सौर्य मासको संख्या बाह्रै भए पनि चान्द्र मासको संख्या तेह्र हुने भयो । यही तेह्रौं महिना नै अधिकमास हो । यसरी हरेक तीन वर्षभित्र एक चान्द्रमास बढी भएर अधिकमास परेको हो ।
सधैभन्दा एक महिना बढी हुने भएकाले यसलाई अधिकमास भनिएको हो । अन्य महिनाका ३० तिथिमा संक्रान्ति पर्छ तर मलमासमा पर्दैन तसर्थ यो महिना अशुद्ध मानेर मलमास भनियो । अर्को, यसलाई पुरुषोत्तम मास पनि भनिन्छ । पौराणिक कथा अनुसार यो महिनालाई मलमास भनेर कसैले पनि मांगलिक कार्य गर्न नमान्ने र यो महिनालाई अशुद्ध रूपमा लिइयो । यस्तो अवस्थामा यो महिना दुखी भएर भगवान् नारायणकोमा पुग्यो र आफ्नो अपमान र पीडा बतायो । यस्तो अवस्थामा भगवान् नारायणले तिम्रो म जिम्मा लिन्छु भनेकाले यसको नाम पुरुषोत्तम मास पर्न गएको इतिहास पुराणमा वर्णन छ ।
मलमासमा के गर्न हुँदैन, के गर्न हुन्छ ?
यो महिनामा विवाह, व्रतबन्धजस्ता कर्मकाण्ड गर्नु वर्जित मानिएको छ भने विविध खालका यज्ञ पनि गर्नु राम्रो मानिन्न ।
यो महिनामा दैनिक गरिने नित्यकार्य गर्न हुन्छ । स्नान, दान, जप, ध्यान गर्न हुन्छ । त्यस्तै दैनिक गरिने शालिग्राम पूजा गर्न पनि निषेध छैन । योमहिनामा भागवत् पुराण श्रवण गर्नु उत्तम मानिन्छ भने पुरुषोत्तम महात्म्य श्रवण गर्नु शुभ मानिन्छ । यो महिनामा पुरुषोत्तमको व्रत पनि गरिन्छ । यो महिनाको अन्त्यमा काँसको कचौरामा राखेर मालपुवा दान गर्नु उत्तम र पुण्न्यप्रद कार्यका रूपमा लिइन्छ ।
अवैध रुपमा ल्याएको भारतीय नोट सहित एक भारतीय पक्राउ
राजु परियार र माया नानुको आवाजमा “यो दुनिया ” सार्बजनिक (भिडियोसहित)